बधाई ! नेपालले बनायो इतिहास, पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाईनलमा - TajaKhabarTV
बधाई ! नेपालले बनायो इतिहास, पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाईनलमा
२०७८, २७ आश्विन बुधबार १८:५० October 13, 2021 ताजा खबरखेलकुद
२७ असोज, काठमाडौं । नेपाल माल्दिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा बंगलादेशलाई १-१ को बराबरीमा रोक्दै नेपालले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। बंगलादेशले नवौं मिनेटमा सुमोन रेजाको गोलमार्फत् अग्रता लिएको थियो। ८६औं मिनेटमा नेपालले बराबरी गोल फर्काएको हो। नेपाल पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको हो।
बंगलादेशका सुमन रेजाले नेपालविरूद्ध नवौं मिनेटमा गोल गरेका थिए। बराबरीसँगै नेपालले चार खेलबाट ७ अंक जोडेको छ। दोस्रो स्थानको माल्दिभ्सको ६ अंक र तेस्रो स्थानमा भारतको ५ अंक छ। अहिले राति ९:४५ बजे भारत र माल्दिभ्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फाइनलमा पुग्न माल्दिभ्सलाई बराबरी भए पुग्छ भने भारतलाई जीत चाहिन्छ। यो खेलको नतिजापछि नेपालले फाइनलमा भिड्ने टिमको टुंगो लाग्नेछ।
एशियाकै दास्रो लामो जिपलाईन काठमाडौंको शंखरापुरमा संचालन हुने भएको छ । साहसिक खेलको रुपमा परिचित जिपलाईन शंखरापुर नगरपालिकामा वडा नं. ८ मा पर्ने मणिचुड देखि जहरसिङ पौवा सम्म करिब २८ सय मिटर लामो जिप लाईन संचालनको काम अगाडि बढेको छ ।